French makosi muCanada | BLI Zvikoro zvemitauro muCanada
Zvose Gwaro reFrenchTsvaga chirongwa chinokodzera zvaunoda
BLI inopa dzakasiyana siyana zvirongwa zvemitauro kuti zvienderane nezvinodiwa nemudzidzi wese. Tiine akasiyana siyana marongero uye sarudzo, isu tinokwanisa kukutora iwe kubva kwekutanga kutaurirana kune epamberi hunyanzvi hwekudzidza kuburikidza nekuita uye zvine simba zvidzidzo zvinopihwa nevane ruzivo vadzidzisi vanonzwisisa zvako zvinokurudzira uye zvinangwa.
Pakupera kwechirongwa, iwe uchave wakashongedzerwa zviri nani kutaurirana nenzira yakasarudzika uye yakasikwa uye uchakwanisa kuratidza pfungwa dzako nemifungo nekujeka uye nekujeka mumamiriro akasiyana.
9:00 - 4:35 AM
Zvidzidzo pavhikiSuper Intensive
Vandudza ruzivo rwako mune chaiyo mitauro yemitauro kuburikidza nekuvandudza kweprojekiti uye kudzidza-kwakavakirwa kudzidza. Dzidzira kugona kwako kunyora, kukudziridza kugona kwako kuteerera, kunatsiridza kugona kwako kuverenga.
Kwidziridza nzira yako yekufunda kuburikidza nehunyanzvi ekisheni ESL / FSL. Kuburikidza nemusanganiswa weTask-Yakavakirwa Kudzidza uye zvetsika hunyanzvi zvidzidzo. Sarudza makirasi anoenderana nenharaunda yaunofarira.
9:00 - 3:20 AM
9:00 - 2:05 AM
Zvidzidzo pavhikiNguva izere
Zvakare nekuvhara hunyanzvi hwemitauro mana mune yakasarudzika uye yekudyidzana nekukudziridza, kukudziridza kutaridzika uye kutsanangudza kuburikidza nemashopu akagadzirirwa kukubatsira kunatsa kugona kwako kwekutaura nemuromo.
Dzidza uye dzidzira zvese zvikamu zvemutauro iwe zvauri kudzidza kufukidza zvese zvina hunyanzvi (kuverenga, kunyora, kutaura uye kuteerera), girama uye mutsara wemazwi uchishandisa nzira yekudyidzana mumakirasi ane simba uye anobata.
General French ZvirongwaTsananguro yekirasi
Muchivako ichi chemakirasi vadzidzi vanozodzidza ese epfungwa girama mazano akakosha kuti vavandudze kururamisa kwavo, kutsetsenura uye kugona kwavo mwero muChirungu neFrench. Ichi chikamu chinofambidzana apo vadzidzi vane mukana wekushandisa girama uye kudzidza nezvemitemo kubudikidza nekutsvaga, nekutungamirwa nemudzidzisi uye neimwe tsananguro yakajeka. Kumwe kusimbisa kunoiswa pakukwanisa kutaura uchishandisa iyo girama poindi, ndosaka kune mikana yakawanda kwazvo yekudzidzira nekuvandudza. Vadzidzi vanozokwanisa kudzidzira hunyanzvi hwemitauro mina (kuteerera, kutaura, kuverenga nekunyora) mune yakasangana mamiriro. Kirasi misoro dzakasiyana dzakasiyana dzakakodzera masosi kuburikidza neakasiyana matekinoroji ekudzidza ayo anokurudzira kutaurirana mune chaiko nyika nharaunda Vadzidzi vanovandudza hunyanzvi hwavo hwemutauro vachishandisa bhuku rezvidzidzo pamwe nekutora chikamu mumabasa akasiyana siyana kuvabatsira kudzidza uye kufambira mberi.
Iyi kosi inoshanda epakati basa reFrance uye yakarongedzwa zvakatenderedza misoro yakagadzirirwa kuvandudza hunyanzvi hwezuva nezuva hwekutaurirana. Vavariro iri mukirasi iyi kukudziridza kutapira. Iko kune tarisiro yekutaura uye kudyidzana pakati pevadzidzi kuitira kuti vashandise izvo zvavanenge vadzidza mumakirasi avo apfuura. Kirasi iyi inofambidzana uye inokurudzira timu uye yeboka kuti vaone kuzadzisa chinangwa chekudyidzana senge mutauri wemunharaunda uye kupokana nevadzidzi kuburikidza nemabasa uye zviitiko zvinokonzerwa neprojekiti zvakaita semitambo-nhabvu, nhaurirano, hurukuro, kutaurira nyaya, mitambo yekutaurirana kana yemashoko uye mini mapurojekiti.
Iyi kirasi inosimudzira ruzivo rwako mune chaiyo mitauro yemitauro kuburikidza nemitambo yekuita kwakasiyana siyana. Chikamu chega chega, pane chakatarisana chakasiyana, sekuverenga, kunyora, kuteerera, kutaura, mazwi uye mazwi, zvinosanganisira zvirevo, pamwe nemataurirwo edzidziso uye basa rinotungamirwa nebasa. Pane zvikamu zvakasiyana zvinoenderana nechikamu chimwe nechimwe, kubva pakutanga kusvika kumusoro. Iwe unogona kudzidzira hunyanzvi hwako hwekunyora nekugadzira pepanhau rechikoro, kana kuvandudza kugona kwako nekutevera nyika yeredhiyo uye podcasts.
Iyi kirasi yakagadzirirwa kukubatsira kukurumidza kuita yako yekudzidza apo ichikubvumira iwe mukana wekusarudza makosi akaenderana nezvako chaizvo zvaunoda uye zvaunoda. Nguva yega yega isu tinopa hwakasiyana nyanzvi Chirungu / French chiitiko chine yakatarwa tema kana yepakati kutarisisa, senge chiFrench mumafirimu uye mimhanzi. Nekuti pane vanowanzove vashoma vadzidzi mukirasi ino, pane kutarisisa kwakatemwa kubva kumudzidzisi.
Kosi inotanga misi
Muvhuro wega wega
Mininum 1 vhiki (Hapana maximium)
Avhareji 12 | Maximum 16
16 uye mukuru